China Ruoko Extrusion Welding Pfuti LST610A fekitori uye vanotengesa | Lesite
Hot Mhepo Welder
Welding geomembrane Welding
Nematende Uye Banner Welding
Ruoko Extrusion Welding Pfumo LST610A
➢ Iyi extruder yepurasitiki inoshandisa 1300w chibooreso chemagetsi chakatumirwa kubva kuGerman Metabo semotokari yekuwedzera, ine simba rakakwira, kushomeka kushoma uye dziviriro yakasimba. Uye kutora hunyambiri hwekudziya sisitimu kunogona kuzvimiririra kudzora kudziya kwetembiricha yezvinhu zvepasi uye tsvimbo yekutungidza, izvo zvinoita kuti hunyanzvi hwekunamatira huve pamusoro uye neyakagadzika musono mhando zviri nani. Panguva imwecheteyo, inoshongedzerwa neshamhu yekudziya kudziya dhijitari tembiricha yekudzivirira, yevhisi inotenderera ye360-degree, inoshanda mashandiro, kugadzikana kuita, yakakura extrusion kugona, inowirirana nomoto, inokodzera PE, PP, mapurasitiki kutenderera.
Ipa kusarerekera kurongedza uye diki batch yeyakagadziriswa masevhisi.
Ipai dzakasiyana siyana dzemoto bhutsu diki batch maitiro maitiro.
➢ Iyo LCD inoratidzira yebhokisi rekutonga iri yakajeka uye iri nyore.
Certification CE chitupa chinoyedzwa neyechitatu bato.
Intelligent Iyo inodzora yekudzora sisitimu inotora kuchengetedzwa kwakapetwa, inotonhora inotanga kudzivirira mota yekutyaira uye otomatiki muripo wekupisa tembiricha kusimudzira kuvimbika kwekushandisa kweiyo extrusion yekutengesa torch, kudzivirira mhosva inokonzereswa nekusabatika kune iyo michina kusvika zvino sezvazvinogona, uye kuwedzera hupenyu hwebasa remuchina.
Kuzvimiririra kwakasimbiswa kwehungwaru kuchengetedza basa, kuitira kuti ive nechokwadi!
Otomatiki Kupisa Mubhadharo Rinoshanda
Mukuita kwekushandisa iyo epurasitiki extrusion welder, kana tembiricha yeiyo extrusion sikuruwa nzvimbo ichichinja, iyo inonzwisisika yekudzvanya system inozozvigadzirisa zvinoenderana neyakatarwa tembiricha.
Kutonhora Start Pkutenderera kwekutyaira mota
Kuwedzera kune yakavakirwa-mukati kuwanda kudzivirirwa kwemotokari mota, yedu yekuzvigadziridza yekutanga yekutanga dziviriro basa inononoka 180 masekondi tisati tarega kutanga mushure mekuratidzwa kwedhijitari tembiricha yasvika kune yakatarwa tembiricha, iyo inodzivirira uye inowedzera hupenyu hwekushanda hwekutyaira. mota kusvika padanho rakakura.
Mhosva Akuratidza kuratidza
Kubudikidza nekodhi yekodhi, vatengi vanogona kukurumidza uye nyore kuziva zvikanganiso zvikamu uye kuita inoshanda kuongorora. Prospectus iripo yekukanganisa kodhi inoenderana netafura
Pashure: Plastiki Ruoko Extruder LST600C
Zvadaro: Plastiki Kuwedzeredza Welding Gun LST610B
Kakawanda 50 / 60HZ
Kuwedzera mota Simba 1300W
Hot Mhepo Simba 1600W
Welding Rod Kuchenesa Simba 800W
Kupisa Kwemhepo 20-620 ℃
Kuwedzera Kupisa 50-380 ℃
Kuwedzera Vhoriyamu 2.0-3.0kg / h
Welding Rod dhayamita Φ3.0-5.0mm
Kutyaira mota METABO
Kurema kwemuviri 7.2kg
Garandi 1 gore
Welding HDPE geomembrane kuti nenyere
Plastiki Ruoko Extruder LST600C
Extrusion Welder Kudziya kwega LST600E
Kuwedzera Welder Granules LST620
Kupisa Mhepo Ruoko Ruoko Extruder LST600B
Plastiki Kuwedzeredza Welding Gun LST610B
Extrusion Welder Kudziya kwega LST610E
© Copyright - Fuzhou Lesite Plastics Welding Technology Co, LTD: Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.